Amandla omoya, imveliso entsha yokutshaja engenazingcingo ka-Apple | Ndisuka mac
UApple uyinike ukukhulisa okukhulu ukutshaja ngaphandle kwamacingo ngenkcazo-ntetho ngale mvakwemini yesincedisi esitsha sendlu, esimiselwe umthwalo weemveliso ze-Apple ezinesi sibonelelo, kunye neemveliso ezizayo esiza kuzibona kwilizwi eliphambili elizayo. Esi sixhobo ekungekho marhe sivelileyo, sifumana igama laMandla oMoya kwaye ngayo, sinokubiza i-iPhone X entsha, iApple Watch yethu kunye neeAirPods.
Amandla oMoya aya kusivumela ukuba sihlawulise zonke ezi mveliso zeApple kunye I-iPhone entsha iya kuba ilungele ukwazi imeko yolawulo nganye nganye ngendlela ezimeleyo. Enkosi kwinkcazo ye Amandla oMoya Siyazazi iinkcukacha zebhokisi yee-AirPods ezintsha. Iyafana kakhulu naleyo yangaphambili, kodwa inesalathiso esincinci ngaphandle kwebhokisi, ebonisa inqanaba lentlawulo. Kwelinye icala, iApple isebenzisa itekhnoloji yeQi, ke ngoko siza kubona izixhobo ezivela eBelkin naseMophie, zilungele ukutshaja. Kwinkcazo-ntetho siyibonile indlela ababelayishwa ngayo kwiikhefi nakumaziko oluntu.
Le "nto yokudlala" intsha evela kuApple izakufumaneka ukusuka ngo-2018. Zimbalwa iinkcukacha ezaziwayo malunga nale nto ye-Apple, kodwa ndivela eMac esiza kuthi sizazi iindaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Amandla omoya, imveliso entsha yokutshaja engenazingcingo ka-Apple